Arbaco, Sept 23, 2020-Sahanka COVID-19 ee Bulshada – LaacibOnline
Arbaco, Sept 23, 2020-Sahanka COVID-19 ee Bulshada
Arbaco, September 23, 2020 (HOL) – Waaxda Caaﬁmaadka ee Minnesota ayaa tagi donna guri kasta ee ku yaal gobolka si ay u hesho dad si lacag la’aan ah uga qayb qaata baritaan lagu samaynayo cudurka covid-19 iyo unnugyada jirka difaaca si qiimeeyn dhab ah loogu sameeyo faaﬁdda cudurkan safmareenka ah.
Fadlan la xiriir [email protected] haddii aad wax su’aalo ah qabto.
Arbaco, September 23, 2020 (HOL) – Xildhibaano ka soo jeeda gobolka Meru ayaa go’aansaday in dowladda Kenya la siiyo waqti dheeri ah si ay u xalliso caqabadaha ganacsi ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Arbaco, September 23, 2020 (HOL) – Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta barlamaanka horgeynaya raysal wasaaraha cusub, Maxamed Xuseen Rooble oo todobaadkii hore uu magacaabay, kadib ku dhawaad 2 billood oo dalku raysal wasaare la’aan ahaa.
Arbaco, September 23, 2020 (HOL) – Dhaqdhaaqa Al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday bar koontarool oo ay ku leeyihiin ciidamada NISA deegaanka Ceel-jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne.
← Foes turned friends recall road to peace
Chelsea transfer rumours: PSG eye Bakayoko, Rudiger and Hudson-Odoi futures in doubt →
Talaado, Nov 17, 2020-Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay in 153 kiis oo Covid19 ah laga diiwaan galiyay Soomaaliya
Jimco, July 24, 2020-Diyaarad laga leeyahay Kenya oo dib looga celiyay hawada Soomaaliya